Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Steam China Manufacturer
Nkọwa:Onye na-ahụ maka eletrik,Enwunye eletrik Defogger,Mgbagwoju anya ngbochi
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe Mgbochi Na-ekpocha Ala > Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Steam
Ndị injinia anyị ga-etolite enyo na-ehichapụ ihe mgbochi nke kwekọrọ n'ihe ndị ị chọrọ site na nkà na ụzụ kachasị elu. OEM oru amara. E mepụtara ngwaahịa anyị iji hụ CE, RoHS, Ul, ETL, ụkpụrụ. Ogo na-edozi n'ezie.
Ndị na-enyo enyo na-ekesa ihu ọma dị na mbara igwe ahụ, na-egbochi mmiri ntancha ahụ site na ịnakọta n'elu igwe anya karịa ka ị na-asa ahụ ma ọ bụ na ịsa ahụ. Nkwado nke nkwụnye onwe onye na-enye ngwa ngwa ngwa ọ bụla na-enyo enyo na nkeji ole na ole. Site na mirror defogger usoro arụnyere n'ime ime ụlọ ịwụ gị, gosipụtara gị agaghị abụ ihe nhụjuanya dị ka ụlọ na-amanye n'elu.
Ụmụaka Puppies Na-amụ Ọhụrụ Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-ahụ maka eletrik Enwunye eletrik Defogger Mgbagwoju anya ngbochi Onye na-ekpo ọkụ eletrik Onye na-achọ iko Onye na-achọ maka mirror ụlọ Ihe na-ekpo ọkụ maka Tile Onye na-akụ mkpụrụ osisi maka igwe